ငါ့ကိုသတ်ခြင်း (ဘလော့) ညင်သာစွာ | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 1, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ဧည့်သည်များ: ၃၃% ကျသည်
စာမျက်နှာမြင်ကွင်း ၃၃% ကျသည်
RSS Subscriptions: ၅% အထက်သို့
Adsense: ၃၃% ကျသည်
Technorati အဆင့် - 4% ကျသည်။
ဤရွေ့ကား, ငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့အကြှနျုပျ၏ကိန်းဂဏန်းများအချို့! ကျွန်ုပ်၏ပုံမှန် visitors ည့်သည်များအတွက်၊ ကျွန်ုပ်သည်တသမတ်တည်းဘလော့ဂ်ရေးခြင်းမပြုကြောင်းသတိပြုမိလိမ့်မည်။ Blogging အကြောင်းပါ အရှိန်အဟုန်။ သင်အရှိန်အဟုန်ကိုဆုံးရှုံးလိုက်သည်နှင့်ချက်ချင်းပြန်ထုတ်ယူရန်ချက်ချင်းနည်းလမ်းမရှိပါ။
ခေါင်းစဉ်ပေါ်ရှိနှင့်မှတဆင့်ရရှိနိုင်သည့်မာလ်တီမီဒီယာ (ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံ) ကလစ်များထဲသို့ဆွဲထုတ်ခြင်း Youtube ကို နှင့်အခြားလိုင်းများ။
ငါလုပ်ခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောနည်းဗျူဟာကဆက်ပြီးတင်ဖို့ပါ Del.icio.us လင့်များ။ ငါအခြေခံအားဖြင့်, ရေးသားခြင်းရပ်တန့်အရေးအသားစဉ်းစားခြင်းနှင့်အခြားဘလော့ဂ်ပြောဆိုမှုများတွင်ပါဝငျတော့ဘူး။ စာဖတ်သူများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုကျွန်ုပ်မထည့်သွင်းရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်ဖြစ်သည် ကိုပြု ဘာတွေဖြစ်နေလဲကြည့်ချင်တယ်
တစ်ခုထားရှိခြင်း RSS ကို အသုံးပြုသူများသည် feed ကိုအသုံးပြုသူများအားဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးထုတ်လွှင့်နိုင်သည်အထိထုတ်ဝေသည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါအပြုသဘောမဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကဒီကိုလာ။ , ငါစာရင်းသွင်းသူအရေအတွက်မည်မျှသတိပြုမိခြင်းနှင့်ပါဝင်ရန်ထိုက်တန်ထင်သော visitors ည့်သည်များဖြစ်ကြောင်းအလောင်းအစားလိုပါလိမ့်မယ်။ Del.icio.us မှနေ့စဉ်လင့်များသည်ဤအသစ်သောသုံးစွဲသူများအားတန်ဖိုးအနည်းဆုံးပေးသည်။
အကယ်၍ သင်သည်စာရင်းပေးသွင်းသူအသစ်ဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်ထံမှနောက်ထပ်မျှော်လင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အလုပ်ပြောင်းခြင်းအလယ်၌ရှိနေပြီးဖောက်သည်တစ် ဦး ထံသို့မြေပုံလျှောက်လွှာတင်ပေးသည်။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင်၊ ငါဟာဒီရက်သတ္တပတ်မှာဘီယာတစ်ခွက်နှစ်ခွက်သောက်နေတယ်။ ၄ င်းတို့သည်လျင်မြန်စွာကြီးထွားလာသော Inc 500 ကုမ္ပဏီ ဖြစ်၍ ၀ န်ထမ်းများအားမကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ကုမ္ပဏီမှထွက်ခွာတော့မည်ဟုမထင်စေချင်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်စိန်ခေါ်မှုအသစ်နှင့်စိတ်ကူးယဉ်အခွင့်အလမ်းသစ်သို့ပြောင်းရွေ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။
တနင်္လာနေ့သည်ကျွန်ုပ်၏အလုပ်ရှင်သစ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမျှော်လင့်နေပါသည်။ နောက်အပတ်အကုန်မှာတော့အေးအေးဆေးဆေးနေပြီးငါပြန်လည်လှုပ်ရှားမယ်။ ဤအလုပ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ပြင်ပဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီများ၊ အွန်လိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းအသစ် (စားသောက်ဆိုင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်ပြည်ခိုင်ဖြိုး)၊ နည်းပညာအသစ်များ (Point of Sale ပေါင်းစည်းခြင်း) နှင့် e-commerce တို့ကိုထိတွေ့လိမ့်မည်။ ငါငုပ်သကဲ့သို့ကြီးစွာသောအကြောင်းအရာအဘို့ပြင်ဆင်ပါစေ!
Martech Zone ထမြောက်ခြင်းလာပြီ။
စီမံကိန်း - တောရိုင်းငှက်များကိုအကန့်အသတ်မရှိ - ဂူဂဲလ်မြေပုံများနှင့်ပျော်စရာ
သြဂုတ် 1, 2007 မှာ 8: 23 AM
Doug - မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ်။ နွေရာသီနှင့်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အသစ်သောအခွင့်အလမ်းများကိုခံစားပါ။
အဲလစ်ဇဘက် / BookTestOnline.com
သြဂုတ် 1, 2007 မှာ 10: 19 AM
ငါ့ website ငါ့ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာဓာတ်ပုံကိုရှာပါ။
အကြောင်းကိုဖတ်ပြီးနောက် Technorati သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သည်
သင်သည်သူတို့၏ site ပေါ်တွင်သင်။
ယခုငါပိုပြီး Fav လိုအပ်ပါတယ်။
သြဂုတ် 1, 2007 မှာ 11: 17 AM
ငါမအံ့ am ဘူးထင်ပါတယ် ငါ RSS feeds ကိုတစ် ဦး ချင်းစီဘလော့ဂ်များ site များသို့သွားရောက်လည်ပတ်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အချိန်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ (ကိစ္စရပ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်အပြစ်တင်ပါ။ ) ပိုမိုဆိုးရွားစေရန်၊ ဘလော့ဂ်ဂါတစ်ယောက်အနေဖြင့်အပြည့်အဝအစာမကျွေးပါကကျွန်ုပ်သည်အများအားဖြင့်ဗလာကိုဖတ်ရန်မတတ်နိုင်တော့ပါ။ (စိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်ကိုထပ်မံအပြစ်တင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အမှားအားလုံးဖြစ်ပါသည်။ )
1:2007 pm တွင်သြဂုတ်လ 1, 32
ဂဏန်းတွေအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်တွင်မူငြိမ်ငြိမ်အသွားအလာနံပါတ်များ၊ စာမျက်နှာများကြည့်ရှုခြင်းနှင့် RSS စာရင်းသွင်းသူများရှိသည်။ ငါ StumbleUpon မှရံဖန်ရံခါမြင့်တက်ရပေမယ့်အကြောင်းပါ။ ထိုအခါမူကားငါ၌တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်သာဘလော့ဂ်တည်ဆောက်ရန်အချိန်သာရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူအခြေအနေအလျင်အမြန်ကြီးထွားရန်မျှော်လင့်မည်မဟုတ်ပါ။
တစ်ပတ်ကိုပို့စ် ၃ ခုအထိရောက်စေဖို့မကြာခင်မှာ Filler post အသစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြိုးစားတော့မယ်။ ငါဘယ်လိုသွားသလဲကြည့်ရအောင်
သြဂုတ် 2, 2007 မှာ 7: 23 AM
Marketing Technology Blog ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းလာပါပြီ။
သြဂုတ် 2, 2007 မှာ 9: 06 AM
ဤရာထူးကိုတန်ဖိုးထားလေးစားပါ - အလုပ်ပြောင်းခြင်းအတွက်ကံကောင်းပါစေ။ သင်မှန်ကန်စွာထောက်ပြခဲ့သကဲ့သို့၎င်းသည်အရှိန်အဟုန်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အကြံအစည်များကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းပေးသည်။ တစ်နေ့တာဝစ်ဂျက်တွင်အပို ၂ နာရီကြာမည်သူမဆိုသိလား။ ! 😉
8:2007 pm တွင်သြဂုတ်လ 5, 50
Quantcast၊ ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်ပြီး ၀ င်ရောက်ခြင်းခံရသည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုအကြောင်းသင်ကြားဖူးလား။ ပုံမှန်အားဖြင့်သုံးပုံတစ်ပုံနှင့်သင်လုံးဝဆိုးရွားနေခြင်းမဟုတ်ပါ၊ 1 ည့်သည် ၅၀ တွင် ၁ ဦး သည်“ စွဲလမ်းသူ” အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်
8:2007 pm တွင်သြဂုတ်လ 7, 15
မင်းကိုချစ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ငါတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ပြန်လာပြီးဆက်ပြောနေမှာပါ။ နည်းလမ်းများစွာအရငါလေ့လာသူပါ။ အခြားလူများအကြားပြောဆိုမှုများကိုစစ်ဆေးခြင်း။